သနပ်ခါးလေးကို ချစ်တယ် …….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သနပ်ခါးလေးကို ချစ်တယ် ……..
သနပ်ခါးလေးကို ချစ်တယ် ……..
Posted by Khaing Khaing on Mar 16, 2012 in Creative Writing, Short Story | 55 comments
ဒီနေ့မနက် ရုံးလာခါနီ သနပ်ခါးကို ကံ့ကော်ဝတ်ဆံမှုံလေးတွေနဲ့ရောကာ အားရပါးရသွေးပြီး လိမ်းခါနီး အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ် …. ဒီနေ့ သနပ်ခါး အကြောင်းလေးတစ်ခုကို ရွာသူရွာသားတွေကို ပြောပြချင်လာတယ် ….. သနပ်ခါးအကြောင်း ဆိုတာထက် ကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းကို ပြောချင်တာပါ ……… အိမ်မှာ မေမေက ကံ့ကော်ပွင့်ချိန်ဆို နှစ်တိုင်းလိုလို ကံ့ကော်ပန်းတွေကို ဘုရားတင်လေ့ရှိတယ်… ဘုရားမှ စွန့် ပြီးရင် အခြောက်ခံပြီး ကျွန်မတို့သနပ်ခါးလိမ်းချိန်ဆို ၀တ်ဆံမှုန်လေးကို အရင်သနပ်ခါးတုန်းနဲ့ မှုန့်ညက်အောင်ကြိတ်ပြီးမှ ရေထည့်ပြီးသွေးလိမ်းလိုက်တယ် … ကံ့ကော်ဝတ်ဆံမှုန်လေးတွေနဲ့သွေးထားတဲ့သနပ်ခါးကို မျက်နှာပေါ်ကို စလိမ်းချိန်မှာ ရရှိလိုက်တဲ့ မွှေးရနံ့ကြောင့် ကျွန်မစိတ်ထဲ အရမ်းကိုစိတ်ကြည်နူးလန်းဆန်းမိတယ် ……. အခုစာရေးနေချိန်မှာတောင် ကျွန်မမျက်နှာက သနပ်ခါးနံလေးတွေရနေတာကြောင့် စာရေးတာကို ပိုမိုအားဖြည့်ကူညီသလိုဖြစ်မိတာအမှန်ပါ …. ကျွန်မ ၇ တန်းကျောင်းသူဘ၀တုန်းက ကျွန်မကျောင်းသွားဖို့အချိန်ကို ၂နာရီလောက်ယူရတယ် …. ကျွန်မတို့ကျောင်းက ၂ချိန်ကျောင်းဆိုတော့ ကျွန်မကနေ့ခင်း ၁၂ နာရီမှ ကျောင်းတက်ရတယ်လေ …. ကျွန်မအလှပြင်ချိန်ပိုရတာပေ့ါ ….. ကျောင်းသွားခါနီး သနပ်ခါးကို မျက်နှာမှစပြီး ခြေထောက်အထိ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလိမ်းရမှ ကျွန်မကျေနပ်မိတယ် ….. အမြဲတမ်းလည်းသနပ်ခါးကို လိမ်းဖြစ်တယ် ….အဲသည်လိုသနပ်ခါးလေး လိမ်းထားတာကို ကိုယ့်စိတ်ထဲ သိပ်ကိုလှတယ် သိပ်ကိုသပ်ရပ်တယ်လို့ခံစားမိတယ် …. ဒီလိုနဲ့ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးတော့ သူများတွေမိတ်ကပ် လိမ်းတာတွေ့တော့ ကျွန်မလည်းလိမ်းချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ် ….. အားကျမိတယ် ကျွန်မတက္ကသိုလ်တက်တော့ သနပ်ခါးမလိမ်းဘဲ မိတ်ကပ်တွေပဲလိမ်းပြီးတက်တယ် …. ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဆိုတော့ နေကလည်းပူ မျက်နှာကလည်းမိတ်ကပ်တွေနဲ့ဆိုတော့ ပြန်လာရင် မျက်နှာတွေက ယားယံနေတာပဲ … နေ့ခင်းဆိုလည်း သနပ်ခါးမလိမ်းပဲ မိတ်ကပ်လိမ်းထားတော့ မျက်နှာကြီးက လေးနေသလိုလို နေမရ ထိုင်မရတင်းတင်းကြီးကိုဖြစ်နေတော့တာပဲ ….. အဲဒါကျွန်မကိုယ်ကျွန်မသိလိုက်တာ ကျွန်မ သနပ်ခါးမလိမ်းရရင် မနေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲ …. အဲနောက်ပိုင်း ကျွန်မသနပ်ခါးပဲလိမ်းဖြစ်တယ် ….
ကျွန်မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀တုန်းက အလှကုန်ဆိုင်မှာ အရောင်းစာရေးမအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖူးတယ် ကျွန်မလိုသနပ်ခါးပဲကြားလိမ်းတဲ့မိန်းကလေးက ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းက Revlon, Loral စအရှိတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေလေ ကျွန်မလေ စိတ်ညစ်လိုက်တာ ကျွန်မတစ်ခါမှ မသုံးဖူးတဲ့ပစ္စည်း မမြင်ဖူးတာတွေ နံမည်တောင်မနည်းလိုက်ကျက်နေရတယ် …. အဲဒီပစ္စည်းတွေရောင်းပေ့မယ့် ကျွန်မကတော့ သနပ်ခါးအလိမ်းမပျက်ခဲ့ဘူး ……. ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာ ကျွန်မလိုလူမျိုးရောင်းတာကို ၀ယ်တယ်သူတွေကလည်း ယုံယုံကြည်ကြည်ဝယ်တယ်ရှင့်. … ကျွန်မကအောက်ခံမိတ်ကပ်ကိုလိမ်းရင်တောင်မှ အပေါ်မှာ သနပ်ခါးလေးတင်လိုက်ရမှ စိတ်ကကျေနပ်သွားတယ် ….. မင်္ဂလာဆောင်တွေ သွားရင်တောင်မှ ကျွန်မမျက်နှာမှ သနပ်ခါးပါးပါးလေးခံလိမ်းသွားလေ့ရှိတယ် …. တစ်ချိုမိန်းကလေးတွေ သနပ်ခါးလိမ်းထားတာ မနက်ကနေညနေအထိကို ပါးကွက်လေးက ကျန်နေတာ တော့်တော့်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ် …. တစ်ချို့ဆိုသနပ်ခါးကို ဖုံနေအောင်ကို လိမ်းတတ်တာ…. ကျွန်မကသနပ်ခါးသာကြိုက်တာ လှအောင်တော့မလိမ်းတတ်ဘူး …. ကိုယ့်ရုပ်ခံကိုက ဆိုးတာလည်းပါတာပေ့ါလေ ….. အခုလိုနွေရာသီပူချိန်မှာ သနပ်ခါးရနံ့သင်းသင်းလေးကို ရူလိုက်ရရင် တော်တော့်ကိုအမောပြေစရာကောင်းပါတယ် …. သနပ်ခါးလိမ်းထားရင် ချွေးထွက်တာတောင် သနပ်ခါးအနံ့လေးက သင်းထွက်လာတယ် ….. သနပ်ခါးအစစ်ကိုလိမ်းထားရင် တခြားရေမွှေးအနံ့တွေထက် သနပ်ခါးအနံ့လေးကပိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းပါတယ် ……. ကျွန်ကရေမွှေးကိုကြိုက်တယ် …. ဒါပေမယ့် ကိုယ်မှာမစွတ်ဖြစ်ဘူး ရေမွှေးနံ့ကိုကြာကြာမခံနိုင်တာလည်းပါတာပေ့ါ ….. သနပ်ခါးအနံ့လေးကိုတော့ တစ်နေကုန်ရလည်း ခံနိုင်တယ် ….. အရမ်းကြိုက်တယ် ….
တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေ မိန်းကလေးထက်သနပ်ခါးကြိုက်တာကျွန်မတွေ့ဖူးတယ် ….. ကျွန်မတို့ရုံးကိုလာတဲ့ သင်္ဘောသားတစ်ယောက်ဆို သူရုံးလာတိုင်း သနပ်ခါးကိုမျက်နှာပေါ်မှာ များစွာလိမ်းပြီးလာတတ်တယ် သူ့ကိုကျွန်မသိပ်သဘောကျတယ် ….. နောက်ထပ် (၂) ယောက်ကတော့ တောင်ငူမှာနေတဲ့ ကျွန်မတို့မိတ်ဆွေတွေလေ အဲဒီဘဘနဲ့သူ့ရဲ့သားမက်ဆို ရန်ကုန်လာရင် အိမ်ကသွေးပေးလိုက်တဲ့သနပ်ခါးဗူးလေးတွေနဲ့ မနက်မိုးလင်းမျက်နှာသစ်ပြီး (၁)ခါ၊ နေ့ခင်းရေချိုးပြီး (၁) ခါ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီး (၁) တစ်နေ့ကို (၃) ခါရအောင်လိမ်းတာကိုတွေ့တော့ ကျွန်မ အံ့သြမိတယ် …. ယောက်ျားတွေဖြစ်လင့်ကစား ဒီလောက်တောင်သနပ်ခါးကိုမြတ်နိုးနေကြပါပေ့ါလား …. သူတို့သနပ်ခါးကုန်သွားတော့ ကျွန်မနဲ့မနက်ဆို လုလိမ်းရတယ် …. ကျွန်မရုံးသွားချိန်သူတို့လည်း သနပ်ခါးလိမ်းဖို့ကို စောင့်နေကြလေရဲ့….. နောက်တစ်ယောက်ရှိတာ ရွာထဲက အခြောက်မတူရပါပဲ တူရလည်း သနပ်လိမ်းတာကို ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်မကိုပြောတယ် …. တူရကျွန်မကိုပြောဖူးတာ သူကသနပ်ခါးလိမ်းပြီး စွပ်ကျယ်အကျီလေးနဲ့ ဘောင်းဘီတိုလေးဝတ်ပြီး အပြင်ထွက်တာ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက နောက်တယ်တဲ့ နောက်လည်းနောက်စရာပါပဲလေ ….. မိုးဒီထက်လင်းကြော်ငြာလုပ်တဲ့ ရုပ်ပေါက်နေတဲ့ပုံကို လူတွေကသူ့ကိုနောက်မှာပေ့ါ …….
သနပ်ခါးကို နောက်ထပ် ခရေပန်းခြောက်လေးတွေနဲ့ရောလိမ်းရင် မိတ်တွေတောင်ပျောက်တယ် …. အေးလဲအေးမွှေးလည်းမွှေးတယ်လေ ….. ရေချိုးခေါင်းလျှော်ပြီးရင် သနပ်ခါးလိမ်းမှ ကျက်သရေရှိတယ်တဲ့ …. မနက်ဆို အိမ်ယာထတာနဲ့ သနပ်ခါးလေးလိမ်းထားရင် တစ်နေ့လုံးစိတ်ချမ်းသာပြီး ကျက်သရေရှိသလိုခံစားရတယ် …. သနပ်ခါးမပါတဲ့မျက်နှာတွေဆို မျက်နှာပူကြီးလို့ ခံစားရတယ် …. ဒါကလည်းကျွန်မရင်ထဲကခံစားချက်ပါ ………
မြန်မာ့ရိုးရာသနပ်ခါးနဲ့ အားလုံးအလှဝေနိုင်ကြပါစေ ……..
အယ် သူရက ဘာလို့ပါလာတာဒုန်းအေ……… သနပ်ခါးကြိုက်တာ ရွာသူတွေသိကုန်ရင် အကုန် ၀ိုင်း မွှေးမွှေးပေးကုန်ပါ့မယ်အေ……..တိုးတိုးသသ လုပ်ပါ…….. ရွာသူတွေ မလာခင်လစ်မှ အာဟိ အာဟိ
အမယ်လေး သူကိုများရွာသူတွေက မွှေးမွှေးပေး ကုန်ပါ့မယ်တဲ့ ဟဟဟ ဒီရုပ်ကြီးများ သနပ်ခါးလိမ်တာ အလကားမဟုတ်ဘူး.. သူကြိုက်နေတဲ့ အခြောက်မ က ကိုကို မီးကိုချစ်ရင်လိမ်းနော်ဆိုလို. လိမ်းလိမ်းနေတာ.. မသိပဲနဲ.
သူများအကြောင်း မပြောချင်ပါဘူးအေ……… အဟတ်အဟတ်
တူရကချောပါတယ်အေ့ မိတိုက်မရဲ့ နေ့ခင်းဆိုရုံးကအဲယားကွန်းကမနိုင်တော့ ပူပြီး သူ့မျက်နှာက ချောမွတ်ပြီးအဆီပြန်နေတာအေ့ ………
သများ လဲ ကြိုက်တာပေါ့၊ ကိုယ်တိုင်လိမ်း ပြီးခံစားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ သူများလိမ်းတာကို ခံစားတာ လွှတ်ကြိုက်တာ၊ သနပ်ခါးလိမ်းထား တဲ့ ကောင်မလေး တွေ မြင်ရင် မနေနိုင်ဘူး၊ ဖက်နမ်းချင်နေတာပဲ။
အမလေးကြောက်စရာကြီးပါလား awra-cho ရဲ့ ဒါဆို awra-cho က ကုလားမလေးတွေ လိမ်းထားရင်လဲ အဲဂလိုပဲလုပ်မှာလားဟင် …….
သနပ်ခါးဆိုတာ မြန်မာ့ရိုးရာစစ်စစ် အလှပြင်ပစ္စည်းပေါ့နော်…
“ဘယ်လိုအသားမဲမဲ…၀ါဝါညက်ညက်ဖြူ” ဆိုတဲ့ ရွှေဘိုသနပ်ခါးသီချင်းထဲကအတိုင်း ညိုသူချောစတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာသနပ်ခါးကို အမြတ်တနိုးလိမ်းတဲ့ မိန်းခလေးတွေကိုတွေ့ရင် ရင်ထဲအေးအောင်လှတယ်လို့ ထင်တယ်…
ကိုဖက်ရဲ့ ကဗျာလေးက သနပ်ခါးလိမ်းတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီးတင့်တယ်သွားစေသလို ပဲနော် ……
သနပ်ခါးက ၀က်ခြံကြောင့်ကျန်ခဲ့တဲ့အမါရွတ်တွေပါပျောက်တယ် ။ အခုလိုပူတဲ့ရာသီမှာ သနပ်ခါးလိမ်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲ ။
သများတို.ကတော့ ရေမိုးချိုး မျက်နှာလေးကို ပရိုမီနာလေး ပါးပါးတင် သနပ်ခါးရေကြဲလေးအပေါ်က လိမ်းပြီးရင် တို.ပတ်လေးရိုက်…
ပါးကွက်လေးကွက်လိုက်ပြီး.. နှုတ်ခမ်းနီး မရဲတရဲလေးဆိုး မျက်တောင်တုလေးကို မက်စ်ကာလာလေးနဲ.ကော့….
အမလေးလေး လှလိုက်တဲ့ငါ့…… အာဟိ
မမတိုက် သိပ်မon နဲ့နော် တော်ကြာ လူမှားပြီး မွှေးမွေးပေးခံရဦးမယ် ……..
မခိုင်ရေ .. အုပ်ထိန်းသူ လုပ်တာကို..သူကြည့်ပြီးပြောတာနေမှာ… အဟိ … ။
ပုံထည့်တာကတော့ သဂျီးမင်းဖလား ပဲ တတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ ….
ကိုယ့်ဟာကိုယ် သာ သွားကြည့်လိုက်ကြပါတော့ ကွယ်တို့….
သနပ်ခါး ကို ရီဒီဖိုင်း လုပ်ပြရရင်တော့ …အင်း ….
စကားမစပ် ကျောက်ပြင် လို့ ခေါ်တဲ့ .. ပြားပြားကြီးပေါ်မှာ
သစ်တုံးကြီးတုံးလုံးလှဲပြီး ရေနဲ့ ပွတ်တာ ..ဘယ်နှရာစု ရှိပီတုန်းဟင်င်င်…
ရီနိုဗေးရှင်းလေး ဘာလေး မီလုပ်ချင်ဒေါ့ဘူးလား …
သဂျီးမင်းပြောနေတယ် … ကမ္ဘာပြားပြီတဲ့ ….
အင်း … ကိုယ့် သနပ်ခါး ကောင်းမှန်းသိတော့ …
သူများ က ရီဆာ့ခ်ျလုပ် မိတ်ကပ်ဖော်ရောင်းတာကို ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ၀ယ်သုံးရတဲ့ခေတ်..
လာဦးမယ် လာဦးမယ်… အစိမ်းရောင်မာကတ္တာတွေ …(အဲ့အစိမ်းသမားတွေကပိုယုတ်မာကြတယ်)
လိုတာက အခေါက်ပဲ ဟာကို သစ်ပင် တွေ ခုတ်ထစ်ဖြတ်တောက်တာ..
ဒါဟာ ဂရင်း မဖြစ်ဘူး ဘာညာ နဲ့ ….
ဒါ အစပဲ ရှိသေးတာနော….
ဘီအိုရေး ၀င်လာရင် … ဘော်ဒီရှောပ့် ၀င်လာရင်..
သနပ်ခါး ထုတ်တဲ့ စက်ရုံတွေမှာ စက်တွေက တဖက်က ရေဖြန်းပြီးတော့ စက်ကသွေးနေတာ.. မော်တာနဲ့ လုပ်တာ ဖြင်ဖူးတယ်။
မခိုင်ရေ … ။
သနပ်ခါးအကြောင်းလေးဖတ်ရပြီး .. အတိတ်က ကလေး ဘ၀ကို သတိရမိတယ် … ။
ငယ်ငယ်က .. အမေကို အရမ်းကြောက်ရတာ .. ရေချိုးပြီး သနပ်ခါးလိမ်းလျှင် ပါးကွက်ကြီးကို ပါးအပြည့်နဲ့ အထူကြီးကွက်ပေးတာ …. ။ သနပ်ခါးမခြောက်ခင် စိုစိစိ အေးစက်စက်ဖီလင်ကြီးကိုလည်း .. ကြိတ်မှိတ်ခံခဲ့ရတယ် … ဒါ့ပြင် ခြောက်သွားလျှင်လည်း … တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ … ။ မျက်နှာသစ်လျှင် .. ပါးနှစ်ဖက်ပဲ ကွက်ဖြူနေတာလည်း ကြုံခဲ့ဖူးတယ် … ။ မျက်နှာတင်မကဘူး .. လက်တွေ ခြေထောက်တွေပါ ..မြင်းကျားကြီးလို .. အစင်းလိုက် လိမ်းပေးတာ … အဲ့ဒါက ကလေးဘ၀ပေါ့ … ။
တက္ကသိုလ်စတတ်တဲ့ အခါ ဘယ်သူမှ ပါးကွက်ကြားကြီးနဲ့ကျောင်းမလာတော့တာသတိထားမိတာရယ် .. အမေကလည်း သနပ်ခါးလိမ်းပါလို့ အတင်း မတိုက်တွန်းတော့တာရယ်ကြောင့် … မလိမ်းဖြစ်တော့ပဲ.. တခြားကော်စမတ်တစ်တွေ အစားထိုးသုံးဖြစ်တော့တယ် … ။ တပတ်လျှင် ပိတ်ရက်လောက်နဲ့ .. ကမ်းခြေသွားပြီး နေဒဏ်ထိပြန်လာတဲ့အချိန်လောက်သာ သနပ်ခါးလိမ်းဖြစ်တယ် … ။
အခုတော့ … လုံးဝကိုမသုံးဖြစ်တော့ဘူး … နှစ်နဲ့ချီနေပြီ … ။
သနပ်ခါးကိုတော့ .. ကျွန်မဧည့်သည် ဂျာမန်အမျိုးသမီး .. အ ရမ်းကြိုက်တယ် … ။ သူ့ကို သနပ်ခါးနဲ့ ကျောက်ပျဉ် လက်ဆောင်ပေးပြီး .. လိမ်းနည်းပြောပြလိုက်တယ် .. ဟိုပြန်ရောက်တော့ ညတိုင်းလိမ်းဖြစ်သတဲ့ … သူတို့ရဲ့ ကြမ်းစိစိ အသားရည်ချောလာပြီး .. မှဲ့ ခြောက်တွေလည်း .. ပါးကုန်တယ်တဲ့… ။နောက်တစ်ခါလာတော့ အင်တာနက်ထဲက သနပ်ခါးအကြောင်းကို ….ကူးပြီး ပရင့်ထုတ်ပေးလိုက်တယ် .. ကြိုက်မှ ကြိုက်ပဲတဲ့ … ။
မခိုင်ရေ .. သနပ်ခါးက တာရှည်မခံတာ ဆိုးတယ် … ။ နောက်ပြီး … အမှုံ့ ကျတာနဲ့ … မခြောက်ခင် စိုစွတ်တဲ့ အတွေ့ထိက … ပျင်းရိစေတယ်လို့ ခံစားရတယ် … ။
သနပ်ခါးထဲကို ခရေပန်း ၊ ကံ့ကော်ပန်း ၊ စံပယ်ပန်းတွေလည်း ..ေ ရာစပ်လိမ်းတာ တွေ့ဖူးပါတယ် .. ။
နောက်ပြီး .. စနွင်းလည်း ထည့်လိမ်းတာမြင်ဖူးတယ်.. အသားလှအောင်တဲ့ ။
ကျောက်ချဉ်လည်း ထည့်လိမ်းတယ် အမာရွတ်တွေ ၊ အမည်းစက်တွေပျောက်သတဲ့ … ။
သံပုရာသီးတွေနဲ့လည်း လိမ်းကြတယ် .. အဆီပြန်သက်သာတယ်ဆိုပဲ …
လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးပေ့ါ မမအိတုံ မီးမီးက သနပ်ခါးကို ရေချိုးပြီးမှသာလိမ်းတတ်တာ ရေမချိုးပဲလိမ်းရင်တော့ တစ်မျိုးကြီးခံစားရတယ် …. မမအိတုံတို့လို အသားလှတဲ့သူတွေကသနပ် ခါးမလိမ်းပဲ မိတ်ကပ်နဲ့လဲလှနေတော့မလိုဘူးပေ့ါ မီးမီးတို့က အသားအရေမကောင်းတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းရင်ပြာတက်လာရော ……… အဖုတွေရှိရင်လည်း သနပ်ခါးလေးနဲ့ အစက်တို့ပြီး ကာလို့ရတယ်လေ…. အဟိ ဟိ
မြန်မာ့သနပ်ခါးကတော့ အသားလဲ အေးတယ်။ တော်ရုံ အဖုအပိန့်အမာရွတ်လဲ ပျောက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကံ့ကော်ဝတ်ဆံနဲ့ သနပ်ခါးလိမ်းတာကို ကြားတော့ ကြားဖူးတယ်။ မလိမ်းဖူးဘူး အဲ့လိုတော့။ သနပ်ခါးမှာ ၀တ်ဆံတွေပါနေတော့ လိမ်းရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား မခိုင်ရေ…စမ်းတော့လိမ်းကြည့်ချင်သေးတယ်။
အသက် ၄၀ ကျော်ရင် သနပ်ခါးမလိမ်းသင့်ဘူးလို့လဲ ကြားဖူးတော့ အဲ့ဒါရော ဟုတ်လားဟင်
kaung kinရေ အဆင်ပြေပါတယ် …. ကံကော်ဝတ်ဆံအခြောက်လေးတွေကို ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ကျောက်ပြင်ပေါ်မှာ သနပ်ခါးတုံးနဲ့အရင် မှုန့်ညက်သွားအောင်လှိမ့်လိုက်ပါ ….. ၀တ်ဆံတွေကို ပန်းပွင့်ကြီးကြီးကရရင်ပိုကောင်းတယ် ပြီးမှ သနပ်ခါးအပွေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရေထည့်ရော သွေး သနပ်ခါးပြစ်ပြစ်လေးနဲ့အ၀ါလေး ညက်နေတာပဲ လှမှလှဖြစ်သွားမယ်…. မီးမီးတောင်ဒီနေ့ သေချာလိမ်းလာတယ် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့စ်ထဲထည့်တင်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ် ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ရုပ်က မလှတော့ ရွာသားတွေဝိုင်းရယ်မှာစိုးလို့ မတင်တော့တာပါ…….
တိုတိုဂီ ကျောက်ပြင်ပေါ်မှာ သစ်တုံးကြီးကို ဘယ်အချိန်ကပဲ စလှိမ့်လှိမ့်ပေ့ါအေ …. တိုတိုဂီကဘာလုပ်မလို့တုန်း ….. တိုတိုဂီရှင်ပြုတုန်းက ပါးမှာ ပါးကွက်အ၀ိုင်းလေး မ၀ိုင်းခဲ့ရဘူးလား…. အဲဒါလေးဝိုင်းဖူးရင် အဲအချိန်က ကျောက်ပြင်ပေါ်ကို သစ်တုံးကြီးစလိမ့်ခဲ့တဲ့အချိန်လို့သာမှတ် …..နောက်တစ်ခု ဒီမှာ မာကတ်တာတိုတိုဂီ သူတို့ဘာသာသူတုိ့ သနပ်ခါးစီးရီးဆိုပြီးဘယ်လောက်ပဲ မိတ်ကပ်ပဲဖော်ဖော် ရေမွှေးပဲဖော်ဖော် မီးမီးတို့က ကျောက်ပြင်မှာ သနပ်ခါး တုံးအစစ်ကြီးကိုတင်လှိမ့်ရမှကျေနပ်တာ…. ရွှေပြည်နန်းတို့ နတ်မိမယ်တို့တောင်ဝယ်မလိမ်းပေါင် ….. ဟွန် …. ဂျပွန်မဂီဂီ သနပ်ခါးလိမ်းဖို့စိတ်ပါပုံမရဘူး သနပ်ခါးလိမ်းသူတွေကိုလည်း အားပေးပုံမရဘူး … သူတို့ဂျပွန်မှာ အေးတော့ ကရင်တွေပဲလိမ်း မျက်နှာပြောင်နဲ့ ဂျပွန်မတွေကို သဘောကျနေပုံပဲ ……… ကဗျာမဆန်တဲ့ တိုတိုဂီ …..
သနပ်ခါးလိမ်းတာကို အားမပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျို့ ….
သနပ်ခါးပင် ခုတ်တာ …ဘိုးတော်ဘုရား မမွေးခင်ခေတ်က
နည်းနဲ့ သနပ်ခါးသွေးတာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်ပြောတာ..
သနပ်ခါးပင်ကနေ အခေါက်ပဲ ခွာယူ ပြီး အခေါက်ကို
ရေနဲ့ ရောစပ် မွှေနှောက်ပြီး ဘလန်ဒါ လိုမျိုး စက်မျိုး…
သနပ်ခါးခြေဆုံးခေါင်းဆုံး လိမ်းဖို့ဆို ရေချိုးပြီး ၁၀မိနစ်လောက်
ချွေးဒီးဒီးကျအောင် ထိုင်သွေးရတယ်ဟုတ် ..
ဒါကို ရိုးရာကွ ဆိုပီး ဆက်ထိန်းဦးမလား……
ဒါဂျီးကို …ကမ္ဘာကိုရော …ဘယ်လိုရောင်းမတုန်း …
(ဆုန်သင်းတုန် ပြောတဲ့ နိုင်ငံခြားသူဆိုတာ ရှားပါးလူစားပါဗျာ..)
သူများတိုင်းပြည်တွေက အော့ဖစ်လေဒီတွေက အချိန်ရှားပါးကြလို့..
သနပ်ခါး စိုက် ဧရိယာ လည်း တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျနေပါပြီ ..
အမွှေးတိုင် ထုတ်လို့ မန်ကျီးပင်တွေလည်း ကုန်ပါတော့မယ်..
ကိုယ့် ရိုးရာ သနပ်ခါးကို ကိုယ်က အမြတ်တနိုး အင်နိုဗိတ်မလုပ်တတ်ခဲ့လို့
သူများက ယူပြီး ကမ္ဘာကိုရောင်းစားရင်း မီလျံဘစ်ဇနက် ဖြစ်နေဘာဘီ…
အော်.. အ၀ဲယားနက် အ၀ဲယားနက်
ညီမလည်း ချစ်ပါတယ် နေပူလာပြီဆိုတော့ တခြားအရာတွေ ထက် သနပ်ခါးလိမ်းထားတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်နော်
ဟုတ်ပါတယ် ညီမလေးame သနားခါးက နွေရာသီမှာ အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်တယ်လေ အသားအရေ ပျက်စီးတာကိုကာကွယ်တယ်လို့တော့ မမကြားဖူးတယ် …… ဒါပေမယ့် မမက ကြိုက်လို့ကို လိမ်းတာ…….
နောက်တစ်မျိုးကျန်နေသေးတယ်ဗျ…………အက်ဆစ်လေးနဲ့သွေးလိမ်း အရမ်းလှမှလှ ………. အာဟိ
တူရက သူ့မျက်နှာကို အက်ဆစ်နဲ့ရောလိမ်းနေကျလေ ဒါကြောင့်သူညွှန်းနေတာဖြစ်မယ် ……. မျက်နှာပေါင်တူရ
မခိုင်ရေ….ကျေးဇူးပါပဲနော်။ ကောင်းကင်လဲ စမ်းလိမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။ ခုလို နွေရာသီမှာတော့ သနပ်ခါးက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ….။ နည်းပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါပဲ…။ မခိုင်လဲ သနပ်ခါးလေးနဲ့ အမြဲလှနေပါစေနော်။
ကျေးဇူးပါ မလှတဲ့မမကို လှအောင်ဆုတောင်းပေးတဲ့ kaung kin yarလေးကိုပေ့ါ ….
ဆူးကရော မနက်ဖြန်သနပ်ခါးလေးလိမ်းလာမယ်ပေ့ါ …ချစ်စရာလေး ….
မမဂီသနပ်ခါးပင်တုံးတာမတုံးတာ မီးမီးမသိဘူး မီးမီးကိုယ်တိုင်လည်းမခုတ်ဘူး သနပ်ခါးလိမ်းနေတာတောင်မှ ကံကောင်းချင်တော့ ကုန်ခါနီးပြီးဆို လက်ဆောင်ပေးမယ့်သူတွေ ပေါ်လာလို့ အသက်ဆက်လိမ်းဖြစ်နေတာ ကိုယ်တိုင်တော့ တစ်ခါမှ မ၀ယ်လိမ်းဖြစ်ဘူး ……. သနပ်ခါးသွေးရမှာ ချွေးဒီးဒီးမကျချင်ရင်လည်း ရေမချိုးခင်သွေးလိမ်းပေ့ါ …. ဂီခြောက်မနှယ် ဆင်ခြေများတာအေ …. နိုင်ငံခြားကိုလည်းရောင်းချင်ရောင်းမရောင်းချင်နေပါအေ… အရေးကြီးတာ ဘယ်သူသေသေငတေမာရင်ပြီးရော မီးမီးလိမ်းနေရရင်ကျေနပ်တယ် … သနပ်ခါးပင်တွေ မတုံးစေချင် တောင်ဂတုံးမဖြစ်စေချင်ရင် တိုတိုဂီ မြန်မာပြည်ပြန်လာမှ ကွင်းဆင်းပြီးတားမြစ်ပေါ့ မီးမီးတို့ကတော့ လိမ်းမှာပဲ လိမ်းမှာပဲ မီးမီးကိုလာမတားနဲ့ …. သနပ်ခါးသွေးတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတောင်ရသေးတယ် …. တစ်ချို့ကတော့ပြောတာပဲ သနပ်ခါးသွေးရင် ခါးလှတယ်ဆိုလား …. မီးမီးကတော့မလှဘူးနော် …ကြိုပြောထားရတယ် တိုတိုဂီကသိပ်စကားတတတ်တာ ……
ဆူး လည်း သနပ်ခါး အမြဲလိမ်းတယ်။
အောက်ခံ မိတ်ကပ် ညီအောင် လူးပြီးရင် သနပ်ခါး ပါးပါး လူးလိုက်တယ်။
မျက်နှာ အဆီပြန်သက်သာတယ်။ သိလည်း မသိသာဘူးလေ။ သနပ်ခါးကို နေ့တိုင်း အဲလို ပုံစံ လူးပါတယ်။
ခိုင်ခိုင်ရေ…အန်တီအိ လဲ သနပ်ခါးအမြဲလူးပါတယ်…
ပြီးရင် သနပ်ခါးလူးတဲ့ brush နဲ့ ခြစ်လိုက်တော့ အရင်အတိုင်း
သနပ်ခါးကို ငယ်ငယ်က အမေက လိမ်းပေးရင် မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ပြည့်တင်းနေအောင်ကိုလိမ်းပေးတာ
နွယ်ပင်ငယ်ငယ်ကဆို သနပ်ခါးလိမ်းပြီးရင် မုန့်တို့ ထမင်းတို့ကျွေးလို့ မရတော့ဘူးတဲ့ သနပ်ခါးပျက်ပြီး
ပါးစပ်ကွက်မှာဆိုးလို့လေ . နောက်အတန်းလေး နည်းနည်းကြီးလာရော သနပ်ခါးကို ငယ်ငယ်ကလို ပြစ်ထူနေအောင် မလိမ်းတော့ဘဲ သစ်ရွက်ပုံလေးတွေ အသဲပုံလေးတွေနဲ့ အလှဖော်ပြီး
လိမ်းဖြစ်တယ် အမေနဲ့ ဈေးလိုက်သွားပြီဆို သနပ်ခါးလိမ်းရင် ပါးကွက်ကိုအလှဖော်လို့ရတဲ့ အတုံးလေးတွေ
အမြဲဝယ်ခိုင်းတက်တယ် . တက္ကသိုလ်စတတ်တော့ မိတ်ကပ်ပေါ်ကနေ သနပ်ခါးရေကျဲလေးပဲလိမ်း ဖြစ်တော့တယ် အခုနောက်ပိုင်တော့ သနပ်ခါးကို မလိမ်းဖြစ်တော့ဘူး နှစ်တွေတောင် မနည်းတော့ဘူးပဲ ………
မန္တလေးက ပူတော့ အများအားဖြင့်တော့ သနပ်ခါးလိမ်းလေ့ရှိတယ်။ ကျမလည်းကြိုက်တယ်။ အေးလို့။
အဲ့လို ၀တ်ဆံလေးတွေနဲ့တော့ တခါမှ မလိမ်းဖူးဘူး။ မွှေးနေမှာပေါ့။
ငယ်ငယ်တုံးက အချိန်တွေများနေတော့ ကိုယ်တိုင်သွေး
မျက်နှာအစ ခြေဖျားအဆုံးကို လိမ်းပါတယ်
သနခါးလေးတွေနဲ့ ဖွေးနေတဲ့ ခြေထောက်လေးမှာ ကတီပါ ဘိနပ်လေး
စီးပြီး အရမ်းကို ကျေနပ်ခဲ့တာပေါ့
အခုများတော့ အချိန်တွေက မလောက်နိုင်တာမို့
ကျွန်တော် သောကြာသားတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။
အဲဒီ သနပ်ခါး လိမ်းတဲ့ သီချင်းအကြောင်းကျွန်တော်က ပြောချင်နေတာဗျ။
ကျွန်တော့် ဆယ်ကျော်သက် ဘ၀ အစလောက်မှာ စနားထောင်ပြီး
အဲဒီသီချင်းရော အဲဒီအခွေရော လုံးဝ မပေါက်ခဲ့ဘူးဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ အခုထိ ကြိုက်နေတုန်း။
အဲဒီအချိန်က ဗဒင်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိသေးတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။
စာသားလေးမြင်ရင် ဘယ်သူဆိုတယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့
ကဲစာသားလေး နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ဗျာ။
လေပြေမလာခင် အဝေးက ရတဲ့ သနပ်ခါးနံ့လေးတွေကို
အာဇာနည်လို့ ပြောကြမယ် မဟုတ်လားဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ် အာဇာနည် ဆိုပြီး နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် မူရင်း သီချင်းပိုင်ရှင်က
ဂျေညီညီ ရဲ့ တတိယ စီးရီး ရင်ထဲမှာ ဆိုတဲ့ အခွေထဲမှာ
၁၉၈၅ လောက်က ထွက်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်မိပါတယ်။
ဗဒင်လိုလူကြီးက သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းရေးပြီး
ဂျေညီညီလိုလူကြီးက မုဒ် အပြည့်နဲ့ဆိုခဲ့တာ အာဇာနည် ကောင်းတယ်ဆိုတာ အလကားပါဗျာ။
အေးလေ ကိုယ်တွေက အသက်ကြီးသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ရလိုက်တဲ့အတွေးပါ။
“နားစည်ကိုထွင်း နှလုံးသားအတွင်းဝင် သွေးကြောထဲလှည့်ပါတ် ဦးနှောက်တွင်ရပ်နေသော (အပိုင်း15) “
(ပေါပ့် အချို လေးတွေ နဲ့ရော့က်အချို)
ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်တို့ ရွှေသီချင်းများက အစပြုလို့ တစ်ခေတ်ပြန်လည်ခေတ်စားလာချိန်မှာ ခင်မောင်ထူးဆိုတဲ့ အဆိုတော်လေးတစ်ယောက်က
(ကြံကြံဖန်ဖန်မေးမယ် နင်လေနင်လေချစ်တတ်သလား)ဆိုပြီး (မီးခြစ်)ဆိုတဲ့ ဟာသီချင်းလေး ပေါ်လာပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်တို့ရဲ့တီးဝိုင်းနဲ့အတူ မင်းလမ်းမင်းလျှောက် ဆိုတဲ့ဆီးရီးစ်မှာ
(ချိုချိုရေ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲဆွေးပြီ အချစ်ကြီးချစ်လို့ အမုန်းကြီးမုန်းပြီလား………….ဆိုတဲ့ ချစ်အယူခံ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲ့
သူ့က သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ စတိတ်ရှိုးမှာဆိုရင် ခေါင်းလေးတငြိမ့်ငြိမ့်ခပ်ပြုံးပြုံးလေးဆိုတတ်သူပါ။
သူ့သီချင်းထဲက အငြိမ့်ပျက်လုံးမှာတောင် ပါသွားတဲ့သီချင်းလေးကတော့အမှတ်တမဲ့များနားထောင်ရင် (ကျွဲမနေ နဲ့)လို့ကြားနေရတဲ့
(ဗန်ဒါပင်လေးအောက်က တို့ထိုင်စောင့်ပြီး………………………..ဆိုတဲ့ မောင့်ဆေးကျောင်းသူ)
(မိုးဦးရဲ့ကုန်လွန်တဲ့နေ့ဟောင်းများပြောင်းသွားတော့ဘယ်ဆီကိုရောက်သွားလဲ ………..ဆိုတဲ့ ခွဲမသွားနဲ့)
(အမေရေ သားတော့သူ့ကိုအစွဲကြီးစွဲမိပြီ…………….ဆိုတဲ့ အချစ်နတ်သမီး)
အဲဒီတုန်းက နာမယ်ကြီးတဲ့ဟေမာနေ၀င်းနဲ့ အိုဆန်းဆန်းပြားပြားဆိုတဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးကို အမ်တီဗွီရိုက်တာလေးက အမှတ်တရပါ။
အခုအချိန်မှာဆီးရီးစ်မထုတ်ပေမဲ့ စင်ပေါ်မှာ အသံမပျက်ဟန်မပျက် ဆိုနေတာကိုတွေ့နေရပါသေးတယ်။
အဲဒီအချိန်လောက်မှာဘဲထင်ပါတယ် တပြည်လုံးကို ဝေလငါးပုံကာဗာနဲ့ထုတ်တဲ့ဆီးရီးထဲကနေ ကောင်လေးတစ်ယောက်က
တပြည်လုံးကိုကော်ဖီတွေ တိုက်သွားပါတယ်။ခါးလိုက်တာမှ လန်နေတာပဲ။
(ချစ်ဘူးတယ် အိုမလွယ်ဘူးရူးနိုင်တယ်…………..ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ)
တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဖေနဲ့သားများ သီချင်းကလဲ တော်တော်လေးကောင်းတဲ့သီချင်းလေးတပုဒ်ပါဘဲ။
ဟိုဘက် 1980အလွန်နှစ်များကနေ သည်ဘက်ခေတ်2000ခုနှစ်အလွန်မှာလည်း
စိုင်းစိုင်းလိုလူငယ်တွေနဲ့တွဲလို့ (ကိုယ်ဟာလူကြမ်းလေးပါ အချစ်ရေ့ကိုယ်ဟာလူကြမ်းလေးပါ)လို့
ကလေးတွေနဲ့အပြိုင်လိုက်နိုင်သော (ယောက်ျားယောက်ျား လစ်တတ်ဘတ်တတ်တယ် လို့ 2010 သင်္ကြန်မှာစွပ်စွဲလိုက်တဲ့ အိမ့်ချစ်ရဲ့အဖေပေါ့)
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ကော်ဖီမှာရင် စားပွဲထိုးတဲ့ကလေးတွေက
နောက်အဲ့ဒီခေတ်မှာ (ယုံပါရင်သို့တိုးဝှေ့ဆဲပါခိုင်)ဆိုတဲ့တပုဒ်ထဲနဲ့နာမယ်ကျော်ခဲ့သူက တော့
အခုဂျပန်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အက်စ်ကဲနက်ပါ။နွေရွက်ကြွေမိုးစက်မျက်ရည်ဆိုတဲ့သူ့သီချင်းလေးကတော့ အတီးဆိုလိုအပိုဒ်များက အရမ်းမိုက်ပါတယ်။အက်စ်ကဲနက် သီချင်းများထဲက လူငယ်တွေကြားမှာခေတ်စားဘူးတဲ့ ကြိုပို့ ကြိုပို့ သီချင်းလေးကလဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။အသံအေးအေး သီချင်းအေးအေးလေးနဲ့ အဆိုတော်လေးကလဲ ချမ်းအေးတဲ့ ဂျပန်ပြည်ကို ခပ်အေးအေးလေးဘဲထွက်သွားလိုက်တာ ပြန်ကို မလာတော့ပါဘူး။ အဆိုလဲကောင်းသလိုရုပ်လဲဖြောင့်တဲ့ အက်စကဲနက်ပါ။
နောက်မြန်မာပြည်မှာ ကောင်းတာရောဆိုးတာရော အကျော်ကြားဆုံး အအောင်မြင်ဆုံးပွဲအဆူဆုံးဆိုတဲ့
သူငယ်စဉ်က ရုပ်ရှင်လောက ရောက်စမှာ စိမ်းတယ်လို့မှတ်မှာလားတို့
ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဌေးသားတို့ ချစ်သလားမုန်းသလားပြောပါလား မုသားမသုံးနဲ့လေတို့လိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးတွေဝင်ဆိုနေရင်းက
ကျော်ဟိန်းရဲ့အလှဓါတ်ပုံတွေနဲ့ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ဆီးရီးစ်ကတော့မြောင်းထဲကိုရောက်ပြီး ဂွမ်းသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
နောက်ပိုင်း1983-4လောက်မှာထင်ပါတယ် သုခမိန်လှိုင်ရေးတာကို သူဆိုတဲ့ဆီးရီစ်ထဲက
(ဒိုးရတော့မယ်အချစ်ရယ် နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် အခုခေတ်မှာတောင် “အာဟ အာဟ” တွေထည့်လို့ ဟစ်ဟော့ထဲကို ၀င်ရောလိုက်ပါသေးတယ်။
သူမိန်းမလိုဝတ်ပြီးသရုပ်ဆောင်တဲ့ ကျီးယောင်ဆောင်သောဒေါင်းဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးတွေက ဒီဇာတ်ကားမထွက်ခင်မှာ
ထွက်ထားတဲ့စင်ပေါ်က သီချင်းများဆိုတဲ့ ဆီးရီးစ်ထဲကအရမ်းကိုပေါက်သွားပါတယ်။
(စဉ်းစားကြ။မီးပြတိုက်။ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။သချိုင်းက အမှန်တရား။)တွေက အတွေးအခေါ်တွေပါတဲ့အောင်မြင်သောသီချင်းတွေပါ။
(အသံတွေကြားနေရတယ် ငါ့ခေါင်းပေါ်ကလား ငါ့ခြေထောက်အောက်ကလား…………………..တို့)
(၀င်သက်ထွက်သက်များရွေ့လျားသော မင်းအရိပ် မာယာလွန်အပြုံးနဲ့ အမြဲငါစောင့်ကြည့်နေတယ်…………….တို့)ကတော့ ဒီဘက်ခေတ်ထိအောင်မြင်သောသီချင်းပါ။
အခုလက်ရှိမှာတော့အောင်မြင်သောလောက ကိုကျောခိုင်းလို့သံသရာလွတ်မြောက်ရာလမ်းကို …………………………။
1984ခုနှစ်လောက်မှာ စန်းထလာတာကတော့ မန်းလေးမှာ ဟိုအရင်ကတည်းက ရှဲလ်တီးဝိုင်းရဲ့ပင်တိုင်အဆိုရှင်ဖြစ်တဲ့စင်ပေါ်မှာသီချင်းဆိုရင်း ဘာဂျာလေးကိုပါ ထုတ်ထုတ်ပြီး မူတ်ပြတတ်တဲ့
ဂျေမောင်မောင်ပါ။ဂီတလောကမှာ အဆိုရှင်ရော တေးရေးသူတစ်ယောက်အဖြစ်ရော ကျင်လည်တာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ ကံဇာတာစန်းထလာတဲ့အချိန်ရောက်မှ(အချစ်ရေ့သနပ်ခါးလေး လှအောင်လူးပြီးရင်………………ဆိုတဲ့ အချစ်ရေ ဆီးရီးစ်မှာထိပ်ဆုံးရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ခိုင်ထူးရဲ့နာမယ်ကျော် “ ဆို“တို့ “ဆိုင်သူကိုယ်စီ” ”ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး” တို့ ။
ကံ့ကော်တောမျိုးအောင်ရဲ့နာမယ်ကျော် စွန် သီချင်းတွေက ဂျေကြီးရဲ့လက်ရာတွေပါ။
နေ့စဉ်သုံးသာမန်စကားလေးတွေကနေ လှပသော စာသား သံစဉ်ထွက်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်သူပါရမီရှင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဆက်ထဲပြောရရင် သူ့အကိုဖြစ်သူ ဂျေညီညီကလဲ အချစ်မိုးတို့ စွဲနေပြီတို့နဲ့အောင်မြင်လာချိန်မှာ
လူပျိုကြီးဘဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ဂျွန်သင်ဇမ်းရဲ့သီချင်းလေးကို ပြန်ဆိုလိုက်ရာမှာ အောင်မြင်လို့ပိုလူသိများလာပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ဂျေညီညီအောင်မြင်နေတုန်းသူ့ဆီးရီးစ်တစ်ခု(တတိယဆီးရီးစ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်) ဖြန့်တဲ့နေ့ဟာ မြန်မာပြည်ကို အလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေဘို့အစပြုတဲ့အမှတ်တရ “စနေနေ့”နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ ဖြန့်ရင်းတန်းလန်းနဲ့ရပ်လိုက်ရတာနဲ့ အတူ
သူ့ကံဇာတာလဲ ခဏလေးနဲ့ မှေးမှိန်သွားတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ခုနှစ်ကတော့ 1988 ပါ။
ဂျေမောင်မောင်အောင်မြင်တာနဲ့အတူ သူ့တီးဝိုင်းက အဖွဲ့တွေလဲတစ်ဆက်ထည်းပါလာပါတယ်။
မန်းလေးမြို့က စင်ပေါ်မှာ ပါဖော့မင်းအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတဲ့ ဘိုတောက်
(ဆေးလိပ်တွေလဲ ဖြတ်မယ်ဆိုပိုသောက်နေ…………..အဟွတ် အဟွတ်)ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲ့အတူ
(တို့ကတော့ တော်ပျော် တောမှာဘဲပျော်ပျော်နေချင်တယ်)လို့အော်ရင်းအခုတော့အော်ဇီမှာရောက်နေတယ်ပြောပါတယ်။
သူတို့နဲ့အတူ ၀ါဝါကျော် စနေကျော် တို့ သီချင်းတွေလူသိများလာသလို တေးရေးဆဲလ်ကိုလည်းမွေးဖွားပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ဆက်ထဲ ဂျေမျိုးဆက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဇနီးဖြစ်သူ စန္ဒီကျော်ဒင်ကလဲ သီချင်းတွေဆိုပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
ညည သူတို့ စတိတ်ရှိုးပြီးလို့အပြန် ဂျေကြီးရဲ့ပုခုံးပေါ်မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ကလေးမလေးက သီရိဂျေမောင်မောင်ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။
တစ်ချိန် သည်ဘက်နှစ်ထဲမှာ ပိုးဒါလီသိန်းတန်လေး သူ့အဖေသိန်းတန်(မြန်မာပြည်)သီချင်းလေးတွေခေတ်စားချိန်မှာ
ဂျေကြီးက ပွားလိုက်တာလား စာနယ်ဇင်းကဘဲဖွလိုက်တာလားမသိတဲ့(အဖေ့သီချင်း သမီးပြန်ဆိုတဲ့ခေတ်ကုန်ပြီ)ဆိုတာလေးက ဂယက်ထဘူးပါတယ်။
သည့်နောက်မှာ သီရိဂျေမောင်မောင်က သူ့အဖေသီချင်းတွေပြန်ဆိုတာလဲသိပ်မအောင်မြင်ခဲ့သလို
သီရိတစ်ယောက်ကလည်း (ဘလက်ကော်ဖီ)ခွက် ရဲ့ အပြင်ဘက်ကိုထွက်မလာနိုင်သလိုပါဘဲ။
ဂျေကြီးတို့နဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာဘဲ (နွေရောက်ပြီလေ ရိုးတံကျဲကျဲ အပင်အိုတို့အလှခြင်းပြိုင်ခိုင်းလိုက်တဲ့ ဗစ်တာခင်ညိုရဲ့ညီဖြစ်သူ
က (မင်းမရှိရင်…………………….မြင်မြင်ရာ ၀ိုးတ၀ါးထင်ဆိုပြီး…………………………………တော့
ကြာသာပတေးသား စကားပြောရင်တော့ တိုတိုလေးဘဲ။
ဒါပေမယ့် စိတ်ကတော့ ပြတ်တယ်။
လက်ကို တွေ့ဘူးပြီ။ ဘာနေ့သား ဆိုတာလဲ သိပြီ။ :-)
ဟိုးးးးးးး ဗုဒ္ဓံသရနံ ဂစ္ဆာမိ ဆိုတဲ့ မဂျစ် တို့ ခေတ်နဲ့
အသဲနှလုံးကို ပန်းသီးလေးလို ရေခဲစိမ်ပြီးမှစားမဲ့ ဘိုဘိုဟန်တို့
အရက်ကိုကြိုက်လို့ သောက်တဲ့ စိန်ဝင်းထွန်းတို့
ဧမိစံအကြောင်းပြောတဲ့ ကံ့ကော်တောက ကိုမျိုးအောင်တို့ အကြောင်းတွေလည်းကြားချင်ပါသေးသဗျာ။
သနပ်ခါး ဟာ ပြည်တည်ပြီးရောင်နေတဲ့အနာတွေကိုကျက်စေပါတယ်။
အနာဝ ကိုသနပ်ခါးထူထူလိမ်းအုံထားလိုက်ရင် ပြည်ကိုစုတ်သွားပြီး အရောင်လျော့သွားတာတွေ့ရပါတယ်၊
တိုင်းရင်းဆေး ထဲမှာ ဘယ်လိုသုံးသလဲ သိချင်သား၊ ဆရာထက်ဝေးရေ။
ဒါပေမဲ့ ဒီခေတ်မှာ သနပ်ခါးနဲ့ အပွေးတူတဲ့ အပင်ကို ဓါတုဗေဒ သနပ်ခါးနံ့နဲ့ အကြာကြီး စိမ်ထားပြီးရောင်းနေတာတွေရှိတော့ ဘယ်လိုခွဲခြားရသလဲ သိတဲ့ ရွှေဘိုသား ကြီးများပြောပြသင်ကြားပေးကြပါခင်ဗျာ။
ဆရာတော့မဟုတ်ဘူး တပည့်အယောက် ၆၀ ရှိတယ်
မှန်ရင်ပြန်ချသလို မှားရင်လဲ ဖင်ပိတ်ငြင်းတယ်
ကဲကဲ ဘာကိစ္စနဲ့မှ စိတ်မညစ်နဲ့
ပျော်ပျော်နေသေခဲ ကြီးမိုက်နေ အကြော်တဲ
စိတ်ကူးပြေပျောက် အံဇာတုန်း ခေါင်ရေသောက်
ထပ်ပြောမယ်နော် ကျွန်တော် တနင်္ဂနွေသား
အရီးလဲ သနပ်ခါး သိပ်ကြိုက်ပေါ့။
မယုံမရှိ နဲ့ ခရီးသွားပြီ ဆိုရင် ကျောက်ပြင် ပါးပါးလေး အမြဲထည့်ယူတာ။
ဒီကို ရောက်စတုန်းကလဲ သနပ်ခါးဘဲ လိမ်းတာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ရာသီလဲအေး ရော ဘယ်လိုမှ မရတော့ဘူး။ အသားတွေ ပတ် ပြီး မျက်နှာ မှာ အညိုလို ဖြစ်ကုန်ရော။
အခုတော့ လဲ စွန့်လွှတ် လိုက်ရပြီပေါ့။
မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင်တော့ သနပ်ခါး ကို အားရပါးရ လိမ်းပါတယ်။
ခိုင်ခိုင် ရေးပြထားတဲ့ ပန်းလေးတွေ ထည့်ပြီး လိမ်းတာ ဖတ်ပြီး အနံ့လေးမွှေးမွှေး လေးတောင် ရလာတယ်။
ကီနူးဂီရေ – ဒီမှာလဲ ဝင်ပြောရပြန်ပြီ။
သနပ်ခါးပင် က ခုတ်ဖို့ ကို တမင်စိုက်ကြတာ ရယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ မြေလွတ်မြေရိုင်း တွေ များသေးသမို့ သနပ်ခါးပင် စိုက်ဖို့ကို လဲ အားနာ ချွေတာ စရာ လိုမယ် မထင်ပါကြောင်း။
နောက်ပြီး သနပ်ခါးသွေး တယ်ဆိုတာကလဲ လပ်လပ်ဆပ်ဆပ် သဘာဝ ရနံ့လေး ရအောင်လို့ ချက်ချင်းသွေး ပြီး ချက်ချင်းလိမ်းကြတာ ကွဲ့။
စတော်ဘယ်ရီသီး လပ်လပ်ဆပ်ဆပ် ရဲ့ အရသာနဲ့ စည်သွပ်ဘူးထဲ က စတော်ဘယ်ရီသီး အရသာလိုပေါ့။
ဒီတော့ ဘိုးတော်ဘုရားခေတ် နည်းလမ်းတွေမှာ တစ်ချို့ကို ကို အစားထိုး တိုင်း ကောင်းတာမဟုတ် ကြောင်း အရီးမှ သင်ကြားပေးလိုက်သည်။
This ain’t be an easy thing ahyee latt..
Tanakha is good..medicinal and treditional thing..
But we have to prove that, and we have to re-novate and redefine it.
We know that it’s good toacertain extance and it has some of limitations..
There are very very tricky parts in marketing..under the title of unique selling point
And or seeking opportunity over competition …
The world become flat, and the borders are destroied(toacertain limit)
New era is coming….. if u dun have something cool to sell u can find, seed and ship it..
No one owns nothing means everyone own everything….
As i joked before globalization means living inaTrumpt tower using fone from far east
eating French dinner with Brazilian model….. lol
As to say in da terms of segmentation, upper middle-class and social class A of
metropolitians are marketed by those tanakha-derived make-ups and related things..
Yeah.. small amount… but keep it in mathematics
Marketing terms says they are influencers, or role-models for mass market….
Stronghold direct-challenge is notanew strategy these ages..
But we must win da globle market, isn’t it?
If we love it we have to protect, improve and marketed her,
Da only way to let da world know tanakhar is our own thing…
If not, after 20 or something years….who cares .. where it’s destiny …
At least, thus why we need to define tanakhar2.0
Long live thanakha
And long live marketing
Yote wit htoot tha mar
Zein fone gyii
Evil marketer and
Lu kyike ne te
သနပ်ခါးကြိုက်တာတော့ကောင်းပါတယ် သွေးရမှာတော့ပျင်းတယ် ဒါကြောင့်မလိမ်ဘူး သွေးပေးမယ့်သူရှိရင်တော့လိမ်းမယ် သနပ်ခါးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေတော့သိပါတယ် တခါတလေတော့ သွေးလိမ်းတယ်
သူများ လဲ သနပ်ခါး ကြိုက်တာပေါ့
ဒီပိုစ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး သိချင်တယ်ဆိုလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“နားစည်ကိုထွင်း နှလုံးသားအတွင်းဝင် သွေးကြောထဲမှာလှည့်ပါတ်ဦးနှောက်မှာရပ်တန့်နေသော
မြန်မာပြည်က စတီရီယိုသီချင်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ကောင်းဘွိုင်နှစ်ယောက်ကတော့ မပါမပြီးပါ။
မြန်မာပြည်က ကောင်းဘွိုင် ကိုကို ဘိုဘိုဟန်နဲ့ နှလုံးသားမက္ကဆီကိုက ကောင်းဘွိုင်မမ နော်လီဇာ တို့နှစ်ယောက်ပါ။
ဘိုဘိုဟန်ရော နော်လီဇာရော ဒစ္စကိုခေတ်မှာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော် နှစ်ယောက်ဖြစ်ကြလို့
ဒစ္စကိုကင်းနဲ့ ဒစ္စကိုကွင်းလို့ ပြောမယ် ဆိုရင်လဲမမှားပြန်ပါဘူး။
ဘိုဘိုဟန် က ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်
ဘိုဘိုဟန်သီချင်းခပ်အေးအေးထဲက စလူသိတာတဲ့သီချင်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတောင် နှစ်သက်ပါတယ် သီချင်းဟောင်းလေးကို ပြန်ဆိုထားတဲ့
(ငွေသော်တာရောင်ခြည် ထိန်လင်းတော့သည်ဘုံကြိုးပြတ်တဲ့ မိုးနတ်မဒီ …….ဆရာမကိုဘဲအသဲစွဲအောင်ချစ်မိပြီ)စာသားလေးပါတဲ့ “ဆရာမ”သီချင်းလေးပါ။
စတီရီယိုလောကမှာ ကျင်လည်နေတာကြာပေမယ့် စနာမယ်ကြီးတာကတော့ “အမှတ်တမဲ့နဲ့တွေ့ရှိ ရည်းစားဟောင်းလေးကို ………………..တို့ “ “ မေညွှန်ရာခရီးသွားလိုက်အုံးမယ် အခုမှ မညှင်းသာပြီ သင်ပေးသည့်အပြစ်လက်နဲ့မယူ၊ အသက်နဲ့ယူပါမည်”တို့ “အဖေအမေတွေက ပြောတာလား အကိုမောင်တွေကပြောတာလား လိပ်ပြာလည်ကလေး …………..တို့၊
“ ခြေအစုံကိုရပ်လို့ တွေဝေနေဆဲကွယ်……………..တို့”ပါတဲ့ (ပွမ်ပွမ်မြည်တဲ့အသဲလေး)ဆိုတဲ့သီချင်းစီးရီးစ်လေးမှာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါက်သွားပါတယ်။
သူ့သီချင်းတွေက ဒစ္စကိုသီချင်းမြူးမြူး သူကလဲ စင်ပေါ်မှာ အနက်ရောင်ဝမ်းဆက် ဆံပင်က အရှည်ကြီးလန်ထွက်ပြီးဝဲနေတာနဲ့မြူးကြွနေအောင်ပါဖော့မင့်အပြည့်နဲ့ ပွဲဆူအောင် ပွဲစည်အောင်ဆိုနှိုင်တဲ့လူပါ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် အခုလဲ ကတုံးကြီးနဲ့ပေမယ့်လဲ လူငယ်တွေနဲ့အပြိုင်ကဲနိုင်သေးသူပါ။
(မိုက်ကြိုးကိုလွှဲ လွှဲရမ်းပြီးဆိုတာ သူတစ်ယောက်ဘဲရှိတယ်ထင်တာဘဲ)စင်ပေါ်မှာသူသီဆိုတဲ့အခါ အပြောင်းအလဲလေးလုပ်ပြီး ဆိုတတ်တဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ်ကတော့ မူရင်းက ပန်းရောင်ဝတ်ထားတာဖြစ်ပေမယ့်
“ပန်းရောင်ဝတ်ထားတာ တကယ်ပါဘဲလှတယ်……………….ငါဝင်ခဲ့တော့မယ် ဟိတ်” ဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့သီချင်းလေးပေါ့။
သူ့အတွက်အမှတ်တရ သီချင်းလေးက တော့ သမီးလေး သျှားအိဘိုဘိုဟန်ရဲ့မေမေ သျှား နဲ့ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တွဲဆိုထားတဲ့
(မင်းနဲ့ ဒို့အကြောင်းများရှင်းနေပြီ အောင်သွယ်တွေမလိုတော့ပြီ ကြားစကားများဘေးဖယ်ထား ခပ်မိုက်မိုက်ချစ်ကြစို့)ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါဘဲ။
သူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သီချင်း လူကြိုက်များတဲ့သီချင်းအတော်လေးများပါတယ်။ဒီအထဲကလူအသိအများဆုံး ဟစ်အဖြစ်ဆုံးသီချင်းတွေကတော့
(ဘိုင်စကုပ်ထဲကလိုချစ်မယ်။တတိယမြောက်ရီးစားစကားနိဒါန်း။ဦးဘညွန့်ချစ်ဒုက္ခ။ပြားချပ်ချပ်။သွားတော့။ရီးစားပျက်မ။ချစ်ရတာ အလုပ်ရှုပ်တယ်။ပေါင်ချိန်စက်၊၊လူပေါင်းသန်းပေါင်6း000ထဲကအချစ်။တစ်ပါတ်မှာရှစ်ရက်။အများကြီးစဉ်းစားရမယ်။ အဆိပ်ရည်အပြည့်နဲ့ပုံး၊ အားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ရမယ်(ကိုနေ၀င်းလဲဆိုဘူးတယ်)
ငါဘိုဘိုဟန်နင်ဘယ်သူလဲ ။ အချစ်ကြောင့်သင်္ဘောမှောက်ပြီ။ဒီကချစ်လိုက်ရတာ။အချစ်ကောင်းဘွိုင်)
ဆိုတဲ့သီချင်းတွေအပြင် (ထီးလေးတစ်ချောင်းနဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး မင်းမိဘကသိရင် တော်တော်ခက်မယ်)ဆိုတဲ့စာသားလေးကလဲမိုက်မှမိုက်။
ဒီလိုဟော့ရှော့တွေ အလန်းဇယားတွေကိုဆိုတဲ့သူက အငြိမ်သီချင်းလေးတွေလဲ ဆိုခဲ့တယ်ဆိုရင် ယုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးနော်။
(မြန်မာပြည်ကကောင်းဘွိုင် သေနတ်မပစ်ပါ ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်ဘဲပေါ့)လို့ ကြွေးကြော်နေချိန်မှာ………………………………..
(ဒိုင်းဒိုင်းကောင်းဘွိုင်လိုဘဲ ………….သေနတ်နဲ့ပစ်မယ်ချစ်သူရေ…………………)လို့အော်ပြီးဝင်လာသူက မြန်မာပြည်မှာ
အ၀တ်အစား အလန်းလေးတွေနဲ့စင်ပေါ်စတက်လာသူ ရုပ်ချောဘော်ဒီလှ စင်ပေါ်မှာ လဲ အရမ်းကို ကြွနေအောင်ဖန်တီးနိုင်သူ
(မိန်းကလေးက စက်ဘီးနင်းတယ် ။အသဲဘရိတ်။ရက်ရက်စက်။နှလုံးသားမက္ကဆီကို)တွေက အမြူးအသွက်တွေပါ။
ထူးခြားတဲ့ အငြိမ်သီချင်းလေးတွေကတော့( ရွှေရောင်အိမ်မက်များ။မာလာဆောင်မောင်မလာဘူး။)သီချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
မြူးကြွတဲ့အထူးသဖြင့် ဒစ္စကိုဘိ သီချင်းတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ဘူးသူ စင်ပေါ်မှာ လက်ခုပ်သံအများဆုံး အလန်းဆုံးလို့ပြောရင်လဲ မမှားပါ။
နောက် ကျနော်သီချင်းလောကမှာ လုပ်ကိုင်တဲ့ဆယ်နှစ်တာကလအတွင်းမှာ မြန်မာသံ ဘိုသံ ဘယ်လိုသီချင်းမျုိးလာလာ ပေါက်အောင်ကောင်းအောင်ဆိုနိုင်ပြီးမကြာခင်က မှ မြန်မာပြည်ကို တစ်ခါလာပြီး ပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပသွားနိုင်ပြီး ထူးခြားစွာသူ့မွေးနေ့မှာ သူဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းတွေကို သူ့အရင်ကလူတွေ သူနဲ့ခေတ်ပြိုင်တွေ
သူ့နောက်က ကလေးတွေနဲ့တစ်ယောက်တပုဒ်တွဲလို့ သီဆိုပြီး မြန်မာ့အသံအစီအစဉ်ကနေ တပြည်လုံးအတွက်ထုတ်လွှင့်တဲ့အပြင်
သူကတော့အကယ်ဒမီများရှင်( နားပန်းဆံ)သီချင်းပိုင်ရှင် ယခုထိအနုပညာလောက မှ တာဝန်ကျေနေသေးသူ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ရဲ့သမီးမိဆွေ(ခ)မေဆွိပါ။
မြန်မာပြည် လူငယ်တွေထဲမှာ သီချင်းအများဆုံး ကိုပုံစံမရွေးဆိုနိုင်သူ ပေါက်တဲ့သီချင်းလူကြိုက်အများဆုံးသောသီချင်းပုဒ်ရေအများဆုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။
တစ်ကျော့ပြန်ဇော်ဝမ်းနဲ့တွဲဘက်လို့ ဂီတစာဆိုမောင်ကြေးမုံရေးတဲ့ (မိစိမ်းကားရဲ့မာယာတော)ဆီးရီးစ်မှာ
သူ့ကိုလူသိအများဆုံးလို့ပြောနိုင်တဲ့ (ကမ်းစပ် ဒို့ဟာကမ်းစပ် မင်းဟာရေးလှိုင်းလေးပေါ့အချစ်ရယ်…….)ဆိုတဲ့ ကမ်းစပ်နဲ့ရေလှိုင်းသီချင်းများအပြင်
(လေယာဉ်ပျံ။ဆန်ဖရန်စစ်စကို။အရည်တွေပျော်ကုန်ပြီ။ခေါင်းမော့ပါအုံးချစ်သူရယ်။ပြာပြာလေးလား ၀ါဝါလေးလား၊၊ပန်းပေးပါတယ်။နတ်မြင်းပျံ၊ချစ်လိုက်တော့ 123၊)အစရှိတဲ့သီချင်းပေါင်းများစွာက လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာရောက်လာတဲ့အပြင်
ပန်းသီးသီချင်းများလို့ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး တစ်ခွေပြီးတစ်ခွေဆက်တိုက်ထုတ်တာလဲ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုကြီးကိုကြီးတို့အိပ်ဆေးမရှိတို့လိုအောင်မြင်တဲ့သီချင်းတွေကလဲ တော်တော်လေးကို များပါတယ်။
နောက် မောင်ကြေးမုံစီစဉ်ပေးတဲ့ ရှေးခေတ်ဟောင်းသီချင်းတွေဖြစ်တဲ့်(ချစ်ရေစင်၊ကျေးစေတမန်၊လဲ့လဲ့ဝင်းတို့ ပျို့ဆုတောင်းတို့။ရွှေလိပ်ပြာတို့၊ဟေ၀န်နန်းတို့)လို မေရှင် မကြည်အောင် ဘိလပ်ပြန်သန်းအစရှိတဲ့ ခေတ်ဟောင်းအဆိုတော်ကြီးများရဲ့သီချင်းအနှစ်ကောင်းတွေကို မေဆွိပြန်ဆိုလို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆီးရီးစ်တွေကလဲ အများကြီးပါ။
နောက်တစ်ခေတ်လို့ပြောလို့ရအောင် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သီချင်းကတော့ မြန်မာသံအသွက်သီချင်းလေးတွေလို့ပြောလို့ရတဲ့
(နော်ကိုကိုနော်။ပုစွန်ဆိတ်ကလေးဘယ်လိုငယ်။ခစ်ခစ်ခစ်)အစရှိတဲ့လူငယ်ကြိုက်သီချင်းတွေကိုအောင်မြင်စွာသီဆိုနိုင်သူ တစ်ယောက်ပါ။ကိုင်ဇာရေးပြီးသူဆိုခဲ့တဲ့ ညို့နိုင်လွန်းတဲ့ကျမချစ်သူ သီချင်းလေးက အခုခေတ် ချမ်းချမ်းလက်ထက်မှာလဲ ခေတ်မှီလို့ကောင်းနေဆဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကိုင်ဇာနဲ့တွဲလို့ သီဆိုခဲ့တဲ့ တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည်သီချင်းကတီဗွီမှာ မြန်မာအသံကလွှင့်ပေးတော့ ပိုလို့လူကြိုက်များသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
နောက်ထူးအိမ်သင်တစ်ကိုယ်တော်ရေးဖွဲ့တဲ့သီချင်းတွေ၊စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သီချင်းတွေကိုလဲပြန်ဆိုတော့ မူရင်းနဲ့မတူပေမယ့် သူမူနဲ့သူ ကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ နောက်မြန်မာသံစဉ်ရေဒီယိုသီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းစုံတွဲတေးတွေကို သီဆိုပြန်တော့လဲ ရောင်းမလောက်အောင်ကောင်းခဲ့ စန်းထခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်သလို ပြန်ဆိုတေး ဘုရင်မဘွဲ့ပေးရင်တောင်မှ လွန်မယ်မထင်ပါဘူး။
သူနဲ့ပါတ်သက်လို့ထူးခြားတာပြောရ မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာ တိပ်ခွေကူးရောင်းနေရာကနေ အိပ်ပိတ်ထားတဲ့ ပရီခွေ ကို (အေရိုးဗစ်)ဆိုတဲ့ဆီးရီးနဲ့
စတင် စမ်းသပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
(လေစိမ်းတွေတိုက်နေတယ်)ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာ အဲဒီအချိန်က စိမ်းကားနေသူ မာနကြီးသူကို
သူ့သီချင်းတွေထဲမှာ အထူးခြားဆုံးဆီးရီးကတော့ မန်းလေးမြို့လှိုင်းတေးသံသွင်းက ဆရာဦးဘမင်းကိုယ်တိုင်စီစဉ်တဲ့
ဘယ်လိုထူးခြားသလဲဆိုတော့ မြို့မအပျော်တမ်းတူရိယာအဖွဲ့ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မြို့မငြိမ်းတို့ ဦးဘသိန်းတို့ ရေးဖွဲ့ထားပြီး အဆိုတော်ဦးအံ့ကြီးအများဆုံးသီဆိုခဲ့တဲ့ ခေတ်ဆန်ဆန်သီချင်းအလိုက်လေးတွေဖြစ်တဲ့(ဘုတ်တလုပ်ကန် ။စိုးနှောင့်ဗျာပွေ၊ငွေဇင်ယော်။သုံးရာသီ၊သူကလေး၊ကျောင်းသွားဖော်၊တူရိယာလုလင်)အစရှိတဲ့သီချင်းတွေကို (ဗုံ။လင်းကွင်း။)စတဲ့မြန်မာသံတူရိယာတွေကိုလုံးဝမသုံးဘဲ
မြို့မ အဖွဲ့ကအသင်းသားတွေရယ် ဆရာမြီု့မငြိမ်းရဲ့သားဖြစ်သူ ဦးရွှန်းမြိုင်ူကို သူ့အဖေဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင် အော်ခက်စတြာပုံစံဖြစ်အောင်တေးသွားကိုနိမိတ်ပုံတွေနဲ့ဖန်တီး တီးခတ်လို့မြန်မာပြည်မှာမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ ပုံစံ စာသားအားကောင်းကောင်းကို တေးသွားက မြိုင်နေအောင်ဖြည့်ဘို့အတွက်
တယောအလက်ပေါင်းများစွာကို အသုံးပြုလို့ တစ်ပြိုင်တည်းအသံသွင်းတဲ့စနစ်နဲ့ အသံသွင်းခဲ့ပါတယ်။
စစချင်း ဇင်ယော်တစ်ကောင်တည်း ကမ်းစပ်မှာအစာကောက်နေတာကို တယောတစ်လက်ထဲက အသံပေးမယ်။
နောက်ဇင်ယော်တွေတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် တိုးတိုးပြီး များလာတာကို နောက်ထပ်တယောတွေကတစ်လက်ခြင်းတစ်လက်ခြင်းတိုးတိုးလို့ တီးပေးပြီး ဆိုလိုဝင်ပေးမယ်။
နောက် တယောအလက်ပေါင်းများစွာကို အသုံးပြုလို့ ဇင်ယော်အုပ်လိုက်ကြီးထပျံသွားတာကို အသံနဲ့ဖော်မယ်။
ဒီလိုအသံနဲ့ သရုပ်ဖော်ပြီးမှ အဆိုကနေ (မြစ်ယံသဲနု ကမ်းစပ်ချစ်သံအေးမြတကြည်ကြည် ငှက်ကလေးငွေဇင်ယော် ပျံကာမြူးရှာသည်…………..ဆိုပြီး ၀င်လာမှာပါ။
နောက် ဘုတ်တလုပ်ကန်သီချင်းမှာလဲ (ထိုအချိန်ဝယ် လတပေါင်းမို့ညာညောင်းရွက်ကြွေ ဆိုတဲ့ အသံနောက်မှာ တယောတွေကို အသုံးပြုလို့သစ်ရွက်ကြွေသံတွေကို ဖန်တီးလို့ထည့်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သည်ဆီးရီးစ်ဟာ အနုပညာမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ငွေကြေးအရ အများကြီးရှုံးပါတယ်။
မေဆွိက သည်လိုအောင်မြင်နေတုန်းမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဖြစ်ကလဲ အကယ်ဒမီဆိုတာကိုတောင်လက်ထဲရောက်လာတဲ့အထိအောင်မြင်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားပြီ အနုပညာလောကနဲ့ ကင်းကွာသွားပါတယ်။
(သူငယ်ချင်းရေ ခြောက်နာရီတောင်ထိုးပြီးပါပကောလေ လာကြဟေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားကြပါစို့လေ ………….)လို့ခေါ်လိုက်တဲ့
ရေးလဲရေး ဆိုလဲဆိုတဲ့ အဆိုတော်……………………………………ကလည်း မြန်မာစတီရီယိုသမိုင်းမှာ ………………………………………………
“နားစည်ကိုထွင်း နှလုံးသားအတွင်းဝင် သွေးကြောထဲမှာလှည့်ပါတ်ဦးနှောက်မှာရပ်တန့်နေသော (သို့မဟုတ်)
နှလုံးသားအတွင်းမှ စီးဆင်းလာသော ဂီတပန်းပွင့်များကို
နောက် ဂူးဂဲလ် မှာ
“နားစည်ကိုထွင်း နှလုံးသားအတွင်းဝင် သွေးကြောထဲမှာလှည့်ပါတ်ဦးနှောက်မှာရပ်တန့်နေသော ရိုက်ထဲ့လိုက်ရင်လဲ လင့်တွေကျလာနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါကိုပေါက်ရေ တက္ကသိုလ် ဖြူဖြူသီတို့ အလယ်က အခွံရီး တို့ အကြောင်းတွေလဲသိချင်သေးသဗျို့ လင့်လေးတွေသွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။
မြန်မာ ဆန်ဆန် ဝတ်စားဆင်ယင်ထားပြီး
သနပ်ခါးကို မပါးမထူ လိမ်းကျံထားသော
မြန်မာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်သည်
ကျနော်၏ နံဘေးမှ ဖြတ်သွားလေသည် …
ထိုအခါ ကျနော်သည် သမင်လည်ပြန်၊ ဆင်လည်ပြန်၊ ကျားလည်ပြန် စသည့်စသည့် လည်ပြန် ပေါင်းစုံဖြင့် မျက်စိတစ်ဆုံး ငေးကြည့်နေမိလေသည် …
ကျနော်၏ နှာသီးဝ နားတွင်လည်း အဆိုပါ မိန်းကလေး လိမ်းကျံထားသော သနပ်ခါး ရနံ့တို့သည် ထိုမိန်းကလေး မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်သွားသည့်တိုင် မွှေးပျံ့နေဆဲပင် ဖြစ်ပါတော့သတည်း …။
ဤသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျနော်သည် မြန်မာ ဆန်ဆန် ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး မြန်မာသနပ်ခါး သင်းသင်းလေးအား လိမ်းကျံထားသော မိန်းကလေးများကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းမှာ ထင်ရှားပြီ ..။
ထို မိန်းကလေးမျိုးအား တွေ့လျှင် ကျနော်အား အကြောင်းကြားကြပါ။ မိသားဖသားပီပီ တောင်းရမ်း ယူမည် ဖြစ်ပါကြောင်း …
ရှာပေအုံးတော့ ထမင်းထုပ်ကြီးနဲ့ လူပါမသိုးရုံဖြင့် မှာလိုက်ချင်သည်
(မန်ဒါလီ…. ဆို မာမာအေး ရေး မြို့မငြိမ်း……)
ရင်ခုန်စရာ သနပ်ခါးနံ့လေးတွေနဲ့  ..
ရင်ခွင်ကြားမှာ ခေါင်းကလေး ငုံ့ကာ..
ဟေး….. တို့သကြီးက တို့ကိုသီချင်းလေးနဲ့ ချီးမြှင့်တယ်တော့…. သူကြီးတောင် ကဗျာဆန်တယ် မိဂီမတို့နဲ့များကွာပ သူကဒါတောင် သူကြီးက ဘာဖြစ်သလေးညာဖြစ်သလေးနဲ့ အတင်းကပြော ချင်သေး…. ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သကြီးကို ……… သူကြီးရယ် အဲသံဇဉ်စာသားလေးကို ဖတ်လိုက်ရတာ ရင်ထဲ နွေးသွားတာပဲ ….အဟိ …..အဟိ
ကိုကြီးအံ(ယောက်ျားစစ်စစ်) ဘာမှမပူနဲ့ အဲသည်လိုသနပ်ခါးလိမ်းပြီး မြန်မာလိုဝတ်ထားတာတွေ့ ရင် ကိုကြီးအံဆီကို လမ်းညွှန်လိုက်မယ် လေးဒေါင့်ကန်လမ်းဘေး ရွာသာကြီးအနီးကိုသွားတွေ့ လိုက်ပါလို့လေ……
လေးလေးဘလက် သီချင်းလေးနဲ့ချီးမြှင့်တာ ကျေးဇူးပါနော် …..
လေးလေးပေါက် မီးမီးကိုပြောတော့ စာမေရးချင်တော့ဘူးဆို အခုတော့လည်းရေးထားတာ မီးမီးတောင်အချိန်ခွဲဖတ်ယူရတယ် ……. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မီးမီးပို့စ်မှာရေးပေးတာကျေးကျေးပါနော်…..(ကိုကြီး ကိုကြီး ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ခေါ်နေမယ် ကိုကြီး ကိုကြီး)……
ဲJuma ရေ same to u par…….
စနိုးဝိုက်လေး ဘာမှမပူနဲ့ မမသွေးပေးထားမယ်… လာလိမ်းလှည့်ပါ….
အရီးလတ် အရီးလတ်ရဲ့ အဆိုတွေကို အားလုံးထောက်ခံပါတယ်ချင့် ……….
လမ်းညွှန်ပေးမယ် ချိုလို့ ပျော်လိုက်ဒါ ..
ရွာသာကြီးဘေး ချိုဒေါ့ … ချိုဒေါ့
နာ့ကို အရူးလို့ ပြောလိုက်တာပေါ့ ..
အဟီး .. ဟီး .. ဟင့် .. ဟင့် .. ရွှတ် .. ဖက် (နှပ်ညှစ်သံ)
နာ့ကိုများ အရူးတဲ့ ..
နာ့ကို သူက ကြောနေဒယ် .. အရူးတဲ့ ..
အဲဒီ ကိုင်ကိုင်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက ငါ့သားကို အရူးတဲ့လား
စိတ်မပျက်နဲ့ ဖေကြီး တရုတ်ပြည်က တရုတ်မတွေဝယ်လာခဲ့မယ်
ပေါလွန်းလို့ ဆယ်ယောက်ထဲတစ်တွဲမှ ယွမ် ၂သောင်းကျော်ဘဲရှိတာ
juma က ရွာသူ ဆိုတော့ သနပ်ခါးတော့ကြိုက်တယ်ဗျ….
သနပ်ခါးဆိုလဲ ရှင်မတောင် သနပ်ခါးပဲ ကြိုက်တယ်..မွှေး အမျိူးဆိုတော့လေ ….
ဘယ်လောက်ကြိုက်လဲဆိုရင် ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလိမ်းလို့ မေမေ ကတောင် ဆူတယ်ဗျ..
ဈေးထဲကသနပ်ခါးဆိုလဲ ၀ယ်လိမ်းဘူးးး.. အတုတွေ ပေါလို့ လေ.. ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပွဲကို နှစ်တိုင်းသွားပီး ၀ယ်တာ…ဈေးကလဲ ပေါမှပေါပဲ …
တစ်နေ့ကို နှစ်ခါလိမ်းတယ်…မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ..
ရုံးပိတ်ရက်ဆိုရင် သုံးခါလောက်လိမ်းတာ ….
သင်းပျံ့တဲ့သနပ်ခါးရနံ့လေး ကိုကြိုက်တယ်..စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်း စေတယ် ..
ဘလက်ချော ရေးတဲ့ကွန်းမန့်လေး တစ်ခုက
အမှု တော်တော် ကြီးနေတာ စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
အီးဇီးပါ ဆရာ အီးဇီးပါ။
ဒီကွန်းမန့်လေးကို ပို့စ်ပိုင်ရှင် ခိုင်ခိုင် ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့
နည်းနည်းလေးလွဲသွားတာက ကိုဂျေညီညီ ရဲ့ တတိယ စီးရီး
ဂျေညီညီ့ရင်ထဲမှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပါ။
စိတ်ထဲက မှန်းဆပြီး ၁၉၈၅ လို့ ရေးလိုက်မိပါတယ်။
အမှန်တကယ် ထွက်ခဲ့တာက ၁၉၈၇ စက်တင်ဘာလပါခင်ဗျာ။
ဆရာပြောတဲ့ ၁၉၈၈ လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မင်းကဘယ်လိုသိသလဲလို့မေးရင် တေးစီးရီးပိုင်ရှင် ဂျေညီညီ ကိုယ်တိုင်
မယုံလို့မေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုဂျေညီညီ ဖုန်းနံပတ် ကို
ဘလက်ချော ပြောပြပေးပါ့မယ်။ ကိုယ်တိုင်ဆက်မေးကြည့်ပေါ့ဗျာ။
ကိုဂျေညီညီက သူ့ဖုန်းနံပတ်ကိုပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါလို့ ပြောပါတယ်။
သို့သော် လူပီသစွာ ထည့်မပေးတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော် အခုရေးနေတာက ဂီတလောက သမိုင်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဂီတလောကမှာ ဖြစ်ခဲ့ပျက်ခဲ့တာတွေကိုလည်း ဆရာတို့လောက်
သို့သော် အဲဒီစီးရီး နာမည် နဲ့ အဲဒီသီချင်းကို အဲဒီစီးရီးထဲမှာ
ဂျေညီညီ ဆိုခဲ့တာကတော့ မှန်တယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်။
ဒီလိုတုန့်ပြန်မှုမျိုး ရခဲ့တာကိုတော့ အကြီးအကျယ် အံ့သြမိပါတယ်။
ခိုင်ခိုင်ရေ ဦးဘလက်ချော အမှားအတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ သမီးရေ။
စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ အကြောင်းရေးပြီးနိုင်ဇော်က စာပေဆုရပါတယ်။
ကိုပေါက်ရဲ့ဂီတ ဆောင်းပါးအဟောင်းတွေဖတ်ရတာလည်း ကျေးဇူးပဲဆရာကိုပေါက်ရေ့။
ကိုဘလက်ရေးတာလည်း မသိသေးတဲ့ အကြောင်းကိုရေးပြဖေါ်ပြလို့ကျေးဇူးပဲကိုဘလက်ရေ့
သနပ်ခါးဆောင်းကနေ ဆင့်ပွားရလိုက်တာဆိုတော့ ဆောင်းပါးရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးပဲ။
ကွန်မန့်လေးတွေမှာ ဟာသသဘော ကျီစယ်တဲ့ ကြာသာပတေးသား ဘာညာလေးတွေလည်း
ကျွန်တော်က သီချင်းဆို ၀ါသနာပါတယ်။မဆိုတတ်ဘူး။ဒါကြောင့် သနပ်ခါးမှသည်ဂီတ
အကြောင်းလေးသိခွင့်ရလိုက်လို့ဆရာ ကိုပေါက် ရောဆရာဘလက်ရော အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
ရွှေဘိုသနပ်ခါးတုံးများ ရန်ကုန်လိမ်းဖို့ယူ ဘယ်လိုအသားမဲမဲ ၀ါဝါညက်ညက်ဖြူ တဲ့။
အန်တီလည်း သွေးရမှာပျင်းလို့ မှန်မှန်မလိမ်းပေမယ့် နွေရာသီဆို သနပ်ခါးလေးလူးရတာ သဘောကျပါတယ်။စိတ်လိုလက်ရရှိရင် ပါးကွက်ပါကွက်လိုက်သေး။
စန္ဒီ ၊သနပ်ခါးလေးလှအောင်လူးပြီး ကိုယ့်အကြောင်းတွေးနေပေါ့ကွယ် တဲ့။
တန် သွားပြီ။ .. ရိုးသားစွာပြောရရင် … post ကို အရောင်ခြယ်တဲ့ comment များပါလို့ … ဦးပေါက် နဲ့ ဦးဘလက်ချော ရေ … အလွန် လေးစားပါဒယ်ဗျာ။ inz@ghi ရဲ့ .. Music asaService post မှာ ဦးပေါက် comment ပေးသွားခဲ့တဲ့ … စီးရီး ထုတ်လုပ် ရေးတွေဟာ မလိုလားအပ် တာတွေ အပို သုံးတယ် လို့ ပြောသွားတာကို ခုမှ ပဲ ..ဘာလို့ ပြောသွားတာလဲ ဆိုတာ သိရပါပြီ။ ဦး ဘလက်ချော ရေ … ကြုံရင် ပြောပေးပါဦးနော့ .. ဦး J ညီညီ ရဲ့ သီချင်းတွေ ကိုအားပေးလျက်ပါလို့။ …
ပိုစ့် ပိုင်ရှင် ရေ … ဒီလို သိရခဲတဲ့ ရာဇ၀င် တွေ ဖတ်ရတဲ့ အတွက် ပိုစ့် ပိုင်ရှင် ကို လဲ ကျေးကျေး ပါလို့ နော့
ခိုင်ခိုင့်ရဲ့ပို့စ်မှာ ၀ိုင်းဝန်းအားဖြည့်ပေးတဲ့ ရွာသူရွာသားများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …… ဘယ်သူဘယ်သူမှ အမှားမရှိပါဘူး ….. အမှားဆိုရင်လည်းစေတနာမှားပဲဖြစ်မှာပါ …….. အခုလို ကူညီအားဖြည့်ပေးတာကိုပဲ ခိုင်ခိုင်ကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ် ………. ပို့စ်နဲ့မဆိုင်သည်ဖြစ်စေ ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ ခိုင်ခိုင့်ပို့စ်မှာ တင်ပေးတာ အားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….. လေးလေးဘလက် …. လေးလေးပေါက် …..ကိုကိုဂီ ……အရီးလတ်………ကိုတူရ…မမတိုက်.. ကိုဖက်cat… မောင်လေးဖရဲ …. မမဆူး ….. ကိုHtet way… Ko gyi Kai…aungty tun…မမတုံ… kaung kin pyar… Mon kit…ame… ma ei… pooch… Novy… Burmese or Chinese… JuJuma… မမpadonmar.. ကိုMလုလင်…မနွယ်ပင်… ကိုကြောင်လေး… ကိုကြီးအံ(လူပျိုစစ်စစ်)…awar-cho အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …….. ခိုင်ခိုင့်ပို့စ်တွေထဲမှာ ပျော်ရွင်စွာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါစေ ………